လေလည်လိုက်တဲ့ အလင်းရောင် ကြောင့် ရတနာဗိုလ်တို့ သူငယ်ချင်းတွေအားလုံးက အခန်းအပြင်ထွက်နေရ ပြီး ရယ်မောနေရ…. – Shwe Naung
လေလည်လိုက်တဲ့ အလင်းရောင် ကြောင့် ရတနာဗိုလ်တို့ သူငယ်ချင်းတွေအားလုံးက အခန်းအပြင်ထွက်နေရ ပြီး ရယ်မောနေရ….
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ မင်းသားချော အလင်းရောင်ဟာဆိုရင် ကျရာဇာတ်ရုပ်မျိုး စုံကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် သရုပ်ဆောင်နိုင် တာကြောင့် ချစ်ပရိသတ်တွေ ရဲ့ဝန်းရံ အားပေးမှု ကို ပိုမို ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ။
ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားကြီးတွေလည်း အမြောက်အမြား ရိုက်ကူး ခဲ့ရတဲ့ အလင်းရောင် ကလက် ရှိမှာလည်း အနုပညာအလုပ် တွေကို ဆက်တို က်လုပ်ကိုင် နေရဆဲဖြစ်ပါတယ် ။
အလင်းရောင် က ချောမော ခန့်ညားတဲ့ ရုပ်ရည်ကို ပိုင်ဆိုင်ထား တဲ့ကိုလူချောလေး တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အပြင် သူ့ရဲ့ စတိုင်လ်ကလည်း အမြဲတမ်း မိမိုက်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်နော် ။
ဒီရက်ပိုင်းမှာ ဆိုရင်လည်း အလင်းရောင်က သူ့ရဲ့ချစ် သူငယ်ချင်း တွေနဲ့အတူ ပျော်ပျော် ပါးပါးအပန်း ဖြေနေတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ မင်းသားလေချာ အလင်းရောင်က မင်းသမီးချောလေး ရတနာဗိုလ် နဲ့ဆိုရင် အရမ်းကို ခင်မင်ရင်းနှီးတဲ့ သူငယ်ချင်း တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
မနေ့ကတော့ ‘အလင်းရောင် နဲ့ ရတနာဗိုလ်’ တို့သူငယ်ချင်း တစ်စုက ချွေးထုတ်လိုက်၊ ရေကူးလိုက်နဲ့ ‘Staycation’ လုပ်ကာ အနားယူ ခဲ့ကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ‘ရတနာဗိုလ်’ကသူမတို့အဖွဲ့ရဲ့လှုပ်ရှား မှုတွေကို မျှဝေပေးရင်း နဲ့အလင်းရောင်ကိုပါ ဆေးအကြီးကြီး ထိုးလို က်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော် ။
သူတို့ သူငယ်ချင်း တွေဆုံတဲ့အချိန် အခန်းထဲမှာ ရုတ်တရက် လေလည်လိုက်တဲ့ ‘အလင်းရောင်’ ကြောင့် ‘ရတနာဗိုလ်’တို့ သူငယ်ချင်းတွေအားလုံးက အခန်းအပြင် တောင်ထွက် ခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဒါပေမဲ့လည်း ‘အလင်းရောင်’ က သူမတို့ကို ကြည့်ပြီး အားရပါးရ ထိုင်ရယ်နေတာ ကြောင့် ဗီဒီယိုရိုက်ပြီး တင်ပေး လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ် ။
လေလည်ပြီးထိုင်ရယ်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းအလင်းရောင်ကို ဆေးပြန်ထိုးလိုက်တဲ့ ရတနာဗိုလ်ရဲ့ အခွီဗီဒီယိုလေး ကို ချစ် ပရိသတ်တွေ အတွက် ပြန်လည် မျှဝေပေးလိုက် ပါတယ်နော် ။ကဲ….ဖတ်ရှုပေးတဲ့ ချစ် ပရိတ်သတ်ကြီး ကို အထူးပဲကျေးဇူးတင် ရှိပါတယ်နော်။
လေလည်ပြီးထိုင်ရယ်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းအလင်းရောင်ကို ဆေးပြန်ထိုးလိုက်တဲ့ ရတနာဗိုလ်ရဲ့ အခွီဗီဒီယိုလေး ကို ချစ် ပရိသတ်တွေ အတွက် ပြန်လည် မျှဝေပေးလိုက် ပါတယ်နော် ။ကဲ…ဖတ်ရှုပေးတဲ့ ချစ် ပရိတ်သတ်ကြီး ကို အထူးပဲကျေးဇူးတင် ရှိပါတယ်နော်။
သူရဲ ကောင်းတွေ အတွက် တော်လှန် ကြရ မည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ G FATT…
အေးမြတဲ့ ရာသီဥတု မှာ ပြင်းနေလို့မရဘူး လေ့ကျင့်ခန်း တွေ လုပ်ပြီး အလှမပျက်တဲ့ ပုံလေးတွေ ဖော်ပြလိုက်တဲ့ မေရတီဇော်
ကျေးဇူးရှင် ဆရာကို ဘုန်းကြီးဝတ်နဲ့ တရားဟောကျေးဇူးဆပ် ပေးတဲ့ တပည့်ဖြစ်သူ ‘ပိုင်တံခွန်’ကြောင့် ဝမ်းသာပီတိ မျက်ရည်ကျခဲ့ရတဲ့ ‘ဂျွန်လွင်’